राती निन्द्रा नलाग्ने समस्या छ ? यसो गरि हेर्नुहोस त ! – Nepali Health
राती निन्द्रा नलाग्ने समस्या छ ? यसो गरि हेर्नुहोस त !
२०७६ जेठ २९ गते १९:०७ मा प्रकाशित
बीबीसी । सुत्ने बानीबेहोरामा केही सुधार गरे मानिसहरूले आफ्नो ‘शरीरको घडी’मा परिवर्तन गर्न सक्ने र स्वास्थ्यमा सुधार गर्न सक्ने वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। यूके र अस्ट्रेलियाका अनुसन्धानकर्ताहरूले राति नसुतीकन सक्रिय रहने मानिसहरूमा एक अध्ययन गरेका थिए।
सुन्दा सामान्य लागे पनि यो शैली अनुकरण गरे यसले महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्ने उनीहरूको धारणा छ। सबै मानिसको शरीरमा एउटा ‘जैविक घडी’ हुन्छ। त्यो सूर्योदय र सूर्यास्तसँग अनुकूल भएको हुन्छ। त्यसैले हामीलाई उज्यालो नभएको रातिको समयमा निद्रा लाग्ने गर्छ।
उनीहरूलाई यस्तो निर्देशन दिइयो :
युनिभर्सिटी अफ बर्मिङ्घम, युनिभर्सिटी अफ सरी र मोनाश युनिभर्सिटीले गरेको विश्लेषणमा तीन हप्तापछि यो निर्देशन पालना गर्ने मानिसको ‘जैविक घडी’मा दुई घण्टाले सुधार भएको देखायो।
सुत्ने र उठ्ने समयमा एकरूपता नहुँदा पनि शरीरको ‘जैविक घडी’ अलमलिन्छ।
‘माइनर ओटी’मा पसेर चिकित्सकलाई थर्काउन थालेपछि……